प्रधानमन्त्रीको श्वासप्रश्वास मार्गमा ‘ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन’, स्वाइन फ्लु ‘नेगेटिभ’ – Health Post Nepal
प्रधानमन्त्रीको श्वासप्रश्वास मार्गमा ‘ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन’, स्वाइन फ्लु ‘नेगेटिभ’
२०७५ कार्तिक १२ गते १९:०१
रुघाखोकी, ज्वरो र श्वासप्रश्वासमा संक्रमणपछि मनमोहन कार्डियोथोरासिस, भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर भर्ना गरिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको श्वासमार्गको संक्रमण (रेस्पिरेटोरी ट्र्याक इन्फेक्सन) नै प्रमुख समस्या भएको पाइएको छ । ११ वर्षअघि मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका ओलीमा अन्य संक्रमणको आशंकामा परीक्षण गर्दा श्वासनलीमा ब्याक्टेरियाको संक्रमण देखिएको छ । रुघाखोकी लाग्दा संक्रमण सर्दै गएर श्वासप्रश्वासमार्गमा पुगेर यस्तो संक्रमण हुने गर्छ । संक्रमण फोक्सोमा नपुगेको र निमोनियासमेत नभएको प्रधानमन्त्रीकी चिकित्सक डा. दिव्या सिंह शाहले बताइन् ।
चिकित्सकका अनुसार यस्तो संक्रमण घटाउन चलाइएको औषधिकै कारण सुगर असन्तुलित भएको थियो । ‘पहिल्यैदेखि नै उहाँमा सुगर छ, त्यसमाथि यो औषधिले पनि सुगर बढाउँछ,’ डा. शाहले भनिन्, ‘सुगर नियन्त्रणमा ल्याउन पनि अस्पताल भर्ना गर्नुपरेको हो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला, मुटुलगायत महत्वपूर्ण अंगमा अहिले कुनै समस्या नभएको डा. शाहले बताइन् ।
‘स्वाइन फ्लु’ भनेर चिनिने मौसमी रुघाखोकी एच१एन१को आशंकामा गरिएको घाँटीको नमुना (थ्रोट स्वाब)को परीक्षणसमेत नेगेटिभ देखिएको छ । चिकित्सकले दसैँमा धेरैसँग भेटघाट गर्दा नै यस्तो संक्रमण भएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । ‘श्वासप्रश्वासमा समस्या भएको र टीका लगाउँदा धेरै भेटघाट भएकाले पनि ‘स्वाइन फ्लु’ भयो कि भन्ने आशंका थियो,’ उपचारमा संलग्न एक चिकित्सकले भने, ‘तर, राष्ट्रिय प्रयोगशालामा द्रुत परीक्षण गर्दा नेगेटिभ आयो ।’
डा. शाहका अनुसार बिहान अस्पताल भर्ना गर्दाको तुलनामा उनको स्वास्थ्यमा धेरै सुधार आइसकेको छ । अहिले कहिले–कहिले मात्रै अक्सिजन दिनुपरेको छ । ओलीलाई चिकित्सकहरुले थप संक्रमणबाट जोगाउन अस्पतालमै राखेर औषधिको पूर्ण डोज चलाउने योजना बनाएका छन् । जसका लागि कम्तीमा थप ३ दिन अस्पताल राख्नुपर्ने बताइएको छ । यसैबीच अस्पतालले साँझ विज्ञप्ति जारी गरी पछिल्लो अवस्था सुधारोन्मुख देखिएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा डा. अरुण सायमीको नेतृत्वमा मिर्गौला प्रत्यारोपण फिजिसियन डा. दिव्या सिंह शाह, छातीरोग विशेषज्ञ डा. सन्तकुमार दास संलग्न छन् ।